sactivator.com tinoziva kuti toga mashoko ako pachako kunokosha. Heino ruzivo pane mhando zvemunhu tichigamuchira uye unganidza kana ukashandisa 'sactivator.com'Uye sei tikachengetedza mashoko ako.
Hatifi takatengesa mashoko ako pachako kumapati rechitatu.
Tinoshandisa yechitatu-vebato kushambadza makambani kushumira Kushambadzira kana yaunosishanyira Website yedu. Shambadzo ingasanganisira Cookies izvo angashandiswa nokuda kushambadza makambani kunzwisisa mushanyi wacho zvatinofarira nani uye kuvabatsira kuti kuratidza ukama ma ads. zvisinei, ari Cookies vakagamuchira pamwe okushambadza anounganidzwa nokuda okushambadza kambani uye hatina kuwana mashoko. Makambani aya anogona kushandisa mashoko (kwete kusanganisira zita renyu, adhiresi, chikero chetsamba yemumhepo, kana runhare nhamba) pamusoro kushanya venyu ichi nezvimwe Websites kuitira kupa okushambadza pamusoro zvinhu uye mabasa mubereko kwauri.
Tinoshandisa yechitatu-vebato kushambadza makambani kushumira Kushambadzira kana yaunosishanyira Website yedu. Makambani aya anogona kushandisa mashoko (kwete kusanganisira zita renyu, adhiresi, kana kero ye email) pamusoro kushanya venyu ichi nezvimwe Websites kuitira kupa okushambadza pamusoro zvinhu uye mabasa mubereko kwauri. Kana uchida mamwe mashoko pamusoro tsika iyi uye kuziva nzira dzenyu pazvinhu·vasina ruzivo ichi chinoshandiswa makambani aya.
Malwarebytes Anti-Malware 3.3.1 Premium mutswe
Nord Vpn Pro kutsemuka
For Cubase 9.5 mutswe